Terraforming: chii icho, hunhu uye mapuraneti kune terraform | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 30/04/2021 09:25 | Ciencia
Isu tinoziva kuti munhu arikuparadza zviwanikwa zvepasi redu pamwero mukuru uye kutsakatika chaiko kwemarudzi edu kunosimudzwa pazviitiko zvakawanda nekuda kwekuparadzwa kwepasi redu. Neichi chikonzero, pane kutaura kweiyo terraforming. Izvo ndezve kugadziriswa kwemamwe mapuraneti kune akakodzera kugara vanhu mamiriro. Kwakatangira terraforming kwakaitika mune sainzi fungidziro, asi nekuda kwekuvandudzwa kwesainzi, munharaunda yesainzi iri kutora nzvimbo.
Muchikamu chino tichaenda kukuudza kuti ndeapi matanho ekugadzirisa terraform uye kuti ndeapi mapuraneti anogona kugadziriswa kuti ugare.
2 Mamwe mapuraneti kune terraform
3 Terraforming yeMaris
4 Rarama pamars
Chokwadi chekutaura nezve terraforming chakapfupikiswa mukutsvaga nyika uye kugadzirisa mamiriro ayo kuitira kuti igare kuvanhu. Pane imwe nguva pasi rave rakagadziriswa unogona kutaura pamusoro penzvimbo dzinogona kugarwa dzinogona kushandiswa nevanhu. Izvo hazvina kukosha chete kuti uzive uye nekugadzirisa mamiriro ekunze kuti agare munzvimbo, asi zvakare geological uye morphological zvivakwa kuti zviite ivo vakafanana zvakanyanya nepasi redu. Imwe yezviitiko zvakajairika zve terraforming nevese vesaenzi uye neruzhinji munharaunda ndeye Mars.
Kune vanyori vazhinji vane mukurumbira avo vakaronga kushandura Mars kuita nyika inoenderana nehupenyu hwevanhu. Kune mamwezve mapuraneti anogona kugadziridzwa uye kugadzirisa mamiriro kune munhu. Terraforming idanho rinenge rakakosha mukukudziridzwa nekupona kwemunhu seshiri. Ngatione kuti ndeapi mapuraneti anogona kukoloniwa. Chinhu chine musoro chekuita kutanga nemapuraneti ari mune rezuva iro riri padhuze nepasi. Kunyangwe Venus iri nyika yepadyo kwazvo, kumanikidzwa kwayo mumhepo kwakanyanya uye iine makore esalturic acid uye tembiricha yakakwira. Izvi zvinoita kuti dambudziko rekugara paVenus rive rakanyanya.
Zvakareruka uye zvakanyanya zvakasikwa zvingave kutanga neMars.
Mamwe mapuraneti kune terraform
Iwo mahombekombe egasi mune yezuva ari Jupiter, Uranus, Saturn uye Neptune. Vane dambudziko riri pachena rekuti havana nzvimbo yakasimba yekugara pamusoro payo kunze kwekukosha. Izvi zvinoita kuti ivo mapuraneti asina kana kutaridzirwa ekugadzirisa terraforming.
Mapuraneti emumakungwa ayo anenge akaumbwa negungwa rimwe chete kana anowanzoitika musainzi fungidziro. Mune iyo Interstellar bhaisikopo kana inoverengeka Solaris iwe unogona kuona kuti nyika ivhu repasi sei uye haigone kukoloniwa. Izvi zvinogona kugadziriswa nenzira yakapusa kusiyana nezviitiko zvemagasi ane gasi, asi inenge ichiri mutengo wakakwira. Nekudaro, mapuraneti aya haana kugadzikana kubva pakuona kwemamiriro ekunze sezvo iwo asina kubhururuka kwepasi uye hapana macircuit esilicate uye carbonate.
Pagungwa gungwa kubuda kwemvura kune mashoma uye carbon dioxide inobviswa zvinobudirira negungwa pachayo asi haina kusunungurwa ne lithosphere. Izvi zvinokonzeresa pasi kutonhodza pasi nekumhanya kukuru uye nekupinda munguva yechando uye mune inotevera nhanho ine zuva rakajeka kubuda kwemvura kunowedzera zvakanyanya kugadzira mhepo yemvura zvakare nekunyungudisa chando. Mapuraneti eOceanic anonyanya kugadzikana uye ari zvachose kunze kwemubvunzo wekugadzirisa terraform.
Nechikonzero icho chatadudza pamusoro, imwe yemapuraneti yakanangana nekugadzirisa terraform nevanhu ipuraneti Mars. Mazuva ano Pane mapurojekiti maviri akakomba erwendo rweMars, kunyangwe asiri ekugadzira terraforming. Izvi zvinoratidza kuti nyika inoenderera mberi ichimutsa kufarira kukuru muvanhu. Iyi nyika yakaita sePasi kana Venus yakave iine nhoroondo yegeological. Imwe yenyaya dzakakosha zvikuru ndeyekuti paive nemvura here munguva yakapfuura uye neiyo huwandu hwayo hwaivepo. Icho chinhu chinowanikwa nguva dzese kuve nekugutsikana nezve zvaivepo uye kuti makungwa akauya kuzotora chinenge chetatu chepasi.
Parizvino inzvimbo isina kugadzikana sezvo mhepo yayo yakatetepa ichiita kuti ive nechuru chemhepo yekudzvinyirira iri panyika. Chimwe chezvikonzero zvekuvapo kwenzvimbo dzakatetepa kudaro ndechekuti a simba risina simba rinosvika pamakumi mana muzana pasi pePasi uye kune rimwe divi kusavapo kwemagineti. Inofanirwa kutariswa kuti magnetosphere ndiyo inoita kuti masenduru emhepo ezuva asadzurwe uye anogona kukanganisa mhepo. Isu tinoziva kuti zvidimbu izvi zvinogona zvishoma nezvishoma kuparadza mamiriro ekunze.
Nyika yatinoona haina magnetosphere uye ine mhepo yakaoma sezvo simba regiravhiti rakanyanya kukura. Iyo tembiricha yegungwa inochinja-chinja zvakanyanya uye inogona kusvika pamitengo yemazana emadhigirii pazasi pe zero kusvika pamadhigirii makumi matatu munzvimbo dzeequator. Mhepo kazhinji hadzina kusimba kwazvo uye madutu eguruva anoitika neakawandisa. Dutu rakadai madutu anokwanisa kuzadza nyika yese.
Zvisinei nekuti isu tinowana nyika ine mhepo yakatetepa, zviri nyore kuwana kumhanya kwemhepo inosvika kusvika ku90 km / h. Kuwanda kwacho kwakadzika kwazvo paMars zvekuti pane zvidiki zvekumanikidza kusiyana. Chimwe chinhu chakaitirwa kugadzirwa kwemagetsi paMars kugona kwemhepo kufambisa zvigayo. Uku kugona kunogona kuderedzwa zvakanyanya kunyangwe kutora kumhanya kwedutu rejecha zvakare kunokonzerwa neiyo yakaderera density.
Hunhu hutsvuku hune hunyanzvi hwepasi reMars hwakakonzerwa nekuvapo kwesimbi oxides senge limonite uye magnetite mumhepo. Izvi zvinoita kuti hupamhi hwezvimedu hwakati kurei kupfuura hurefu hwechiedza huri kupinda mupasi uye hunogona kuonekwa mumhepo. Okisijeni iyo mvura mhute mudenga hapana kana matanho, nekuti kuumbwa kwemhepo kuri ne 95% kana kupfuura kabhoni dhayokisaidhi, ichiteverwa senitrogen uye argon.
Kushaikwa kwemagineti kunokonzera mwaranzi yepasi rose kurova Mars, saka mweya wezuva uye ma radiation mwero wakanyanya kukwirira kuvanhu. Mumwe aifanira kugara pasi pevhu.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve terraforming yeMars uye nehunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Terraforming